Drop-in Center: Ahoana no tokony ho fomba fiasan’ny foibe fanarenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2019 3:36 GMT
Filaharana ao amin'ny toerana fitsinjarana Methadone, Kiev, Okraina
Vao haingana i Pavel Kutsev, mpitarika ny Drop-in Center, fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola miezaka mamaha ny olan'ny olona miaina amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina no nizara ny heviny momba ny fahombiazan'ny asa eny amin'ny toerana fanarenana ny olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Manomboka amin'ny fitsikerana ny sasany amin'ny asa eny amin'ny ivotoerana fanarenana efa misy i Pavel:
Ankehitriny, any Okraina, saika ny foibe fanarenana rehetra no raisin'ny olona marobe ho rafitra mhazoana vola, anisan'izany ireo mpiasa birao mpanao kolikoly izay “manampy” ny hafa hahazo fahazoan-dàlana sy taratasy. Matetika ireo mpandraharaha ireo no miseho ho tia asa soa, saingy eo ambanin'izany fanehoana asa soa izany, misy foana ny faniriana mba hahazoana vola fotsiny …
Na dia nitsikera ny sasany amin'ireo asan'ny ivon-toerana fanarenana amin'ny ankapobeny aza izy, dia nizara traikefa tsara momba ny fanarenana izay niainan'ny vadiny tany amin'ny iray tamin'ireo toeram-pitsaboana ara-panjakana:
Tany afovoambonin'ny taompolo 1990s, dia nanana fahafahana nandalo fanarenana ny vadiko. Ho valin'ny lahatsoratra nosoratako momba ny toeram-panarenana mahomby iray tamin'ny gazety, dia nentina tao tamin'ny fandaharana fanarenana ny vadiko. Tsy sahy niditra tao izy tamin'ny voalohany, saingy taorian'ny faharetan'ny fandaharana nandritra ny iray volana, dia tsy te hiala izy.
Toeram-pitsaboana ara-panjakana izany … Efitrano misy efitra fandroana ho an'ny olona roa, sy misy fahitalavitra …
Tapa-bolana ny fanesorana ny zava-mahadomelina tamin'ny buprenorphine sy fanafody hafa tena tsara, ny sauna, ny fitsaboana amin'ny rano, ny otra ary ny fanatanjahatena. Feno hetsika ny tontolo andro, toy ny zavakanto-ara-pitsaboana, ny filatroana, ny sary hosodoko, ny fitsaboana mandeha isaky ny vondrona … Sakafo matsiro, vitamina ary fitiliana ara-pahasalamana sy fitsaboana ny fanaintanan'ny taolana sy ny vanin-taolana, na koa fitsaboana nify mihitsy aza … (Raha ny marina, dia tamin'ny taona 1997, 200 dolara isam-bolana fotsiny no saran'izany, miampy sarany hafa amin'ny fitsaboana nify.) Raha te ho anisan'ny fandaharan'asa ara-tsosialy ao amin'ny foibe ny olona iray, dia mety hahazo vola kely mihitsy. Tena mahafinaritra izany. Rehefa avy niasa nandritra ny enim-bolana tao amin'ny foibe, dia afaka mitahiry vola mitovy tamin'ny nolanianao tamin'ny fanarenana ianao. Maro tamin'ireo mpidoroka rongony taloha no lasa mpiasan'ny foibe. Ny sasany tamin'izy ireo dia nianatra fiteny vahiny ary miasa amin'ny programa mitovy amin'izany any Etazonia, Aostralia, ary Eoropa.
Izany no fandraharahana ara-tsosialy madio. Tsaroako ny resaka nifanaovako tamin'ny filohan'ny foibe, Dr. Galich. Nizara ny nofinofiny momba ny fampidirana fitsaboana solony ho an'ny olona izay tsy afaka narenina tamin'izany fotoana izany, sy ireo izay nifoka rongony naharitra 30 taona ary ireo aretina vitsivitsy tsy andairam-panafody izy. Niresaka momba ny tetikasany hampiditra karazana fandaharanasa manome valisoa ihany koa Dr. Galich. Raha manaiky atao fitiliana rongony indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny herintaona ny marary iray ary ratsy daholo ny valin'ny fitiliana rehetra, dia mahazo vola avo roa heny tamin'ny fandaniany tamin'ny programa fanarenena ny marary iray. Ny zava-misy dia10 monja amin'ny olona 100 no mijanona tsy mikasika rongony aorian'ny fandaharana fanarenana, ka noho izany dia fanentanana tsara ho an'ny marary izany ary koa fandraharahana mahafinaritra [ho an'ny toeram-pitsaboana]. Nolazaiko fa fomba fiasa tsara amin'ny fomba fijery ara-etika sy ara-toekarena izany. Azoko antoka fa tena mahomby tokoa ity fomba fiasa ity
Tamin'ny fiafaran'ny lahatsoratra, nanamarika i Pavel fa, miaraka amin'ireo programa fitsaboana solony, dia tokony hampivoatra bebe kokoa ny programa fanarenana ​​ny governemanta sy ny mpandraharaha ara-tsosialy :
Mba hahitana vahaolana, dia tokony omena ny olona rehetra izay mila azy ny fitsaboana solony, tsy ijerena “fitsipi-pitondran-tena” mamepetra eo amin'ny olona sasany, ny resaka marobe tsy misy dikany ataon'ny mpanao politika sasany sy tsy firaharahiana fotsiny izao.
Ankoatra ny fampiasam-bola amin'ny fitsaboana solony, mila famatsiam-bola any amin'ny foibe fanarenana araka ny nofaritako etsy ambony isika, foibe izay tsy handray ny vola avy amin'ny marary fotsiny, fa hampiasa ny vola mba hanatrarana ny tanjon'izy ireo. Tokony ho ampahany amin'ny programa ara-tsosialy ny faharetana sy ny fahazakantena.